【 ဆောင်းပါး 】“ စိတ်နေသဘောထားကို ပြင်လိုက်ပြီး သင့် ဘဝကို ပြောင်းလဲလိုက်ပါ ” | Opinion Leaders
【 ဆောင်းပါး 】“ စိတ်နေသဘောထားကို ပြင်လိုက်ပြီး သင့် ဘဝကို ပြောင်းလဲလိုက်ပါ ”
ကျွန်ုပ်သည် ယခုတလော၌ မိတ်ဆွေတစ်ဦးက လွန်စွာ ချီးကျူးနေသော စာအုပ်တစ်အုပ်ကို အာရုံကျ မိသွား၏။ ထိုမိတ်ဆွေက ကျွန်ုပ်အား “ဒီစာအုပ်က အမေရိကားမှာ တော်တော်အောင်မြင် လူကြိုက် များနေ တာ ၂၀၁၉ ထဲကဗျ Jeff Keller ရေးတဲ့ Attitude is Everything တဲ့၊ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ရေး စာအုပ်ပဲဗျ။ ခုချိန် ခါ လူငယ်တွေ ယောင်တောင်ပေါင်တောင် ဖြစ်နေတဲ့အချိန် ဒီစာအုပ်ကို ခင်ဗျား ဘာသာ ပြန်ပြီး သူတို့ကို လမ်းပြလိုက်ရင် တော်တော် အကျိုးထူးမှာပဲဗျ” ဟုဆိုလာရုံမက e-Bookကို ပါ ပေးပို့လာသည့်အတွက် ဖတ်ကြည့်ရာ သူ့ရဲ့ အကြံပေးချက်ကို သဘောတူမိသွားလေတော့၏။
သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိသည်မှာ စာမျက်နှာ ၁၀၀ ကျော်သော ထိုစာအုပ်ကို တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်၍ စာအုပ်အနေဖြင့်ထုတ်ပါက ယနေ့ စာဖတ်ပျင်း (ဖုန်းချည်းပဲ ပွတ်ချင်၍ စာ နည်းနည်းသာ ဖတ်လို သော) လူငယ်များ ဖတ်ဖြစ်ရန် သိပ်မသေချာလှပေ။ ထို့ကြောင့် ကောင်းသော အပိုင်းလေးများကို ထုတ်နုတ်၍ ဆောင်းပါးအတိုလေးများ အနေဖြင့် ရေးသားရသော် ပိုအကျိုးထူးမည်ဟု ယူဆမိသည့်အလျောက် Opinion Leader အတွက် ယခု ဆောင်းပါးလေးနဲ့ စတင် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
စာအုပ်အဖုံးကို တွေ့လိုက်တာနဲ့ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ရေးက စနေပါပြီ - “စိတ်နေသဘောထား သည်အရာရာ - သင့် စိတ်နေသဘောထားကို ပြင်လိုက်ပြီး သင့် ဘဝကို ပြောင်းလဲလိုက်ပါ” - Attitude is Everything – Change your attitude….. change your life”.
ဒီစာအုပ်မှာ အပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲပြီး တင်ပြထားတာကို တွေ့ရတယ်။ ဂျက်ဖ် ကီလာ ပြောထားတာက -
အပိုင်း ၁ - “အောင်မြင်မှုဆိုတာ စိတ်ကူးကစတယ်” မှာဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ က စိတ်နေသဘောထားရဲ့ စွမ်းအား နဲ့ ယုံကြည်မှုကနေ မိမိရဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ကို ပုံဖော်မှု အပေါ်မှာ အာရုံစိုက်ထားတယ်။ သင့် တွေးခေါ်မှုအပေါ်မှာ သင့်အောင်မြင်မှုက မှီတည်နေတယ်ဆိုတာ သင်ယူရပါလိမ့်မယ်။
အပိုင်း ၂- “စကားလုံးများကို သတိထားပါ” မှာဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ပြောပုံဆိုပုံ အပေါ်မှာ အာရုံစိုက်ပါမယ်။ သင့်စိတ်နေသဘောထားက သင့်စကားလုံးတွေအပေါ်မှာ ဘယ်လိုရောင်ပြန်ဟပ်တယ်ဆိုတာရယ် ကောင်းသော ပြောစကားတွေက သင့်ပန်းတိုင်ဆီကိုရောက်အောင် ဘယ်လို တွန်းပို့ပေးတယ်ဆိုတာလေ့လာရမှာပါ။
အပိုင်း ၃- “လက်တွေ့လုပ်တဲ့သူကို မိုးနတ်မင်းက ကူညီတယ်” မှာဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ ခရီးစဉ်၏ နောက်ဆုံးခြေလှမ်းကို ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင် ကောင်းစွာ တွေးခေါ်၊ ကောင်းသောစကားတွေကို ပြောကြားသည့်တိုင်အောင် လက်တွေ့ထ မလုပ်သေးသရွေ့တော့ သင့်အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည် ‌ဖော်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သက်သောင့်သက်သာလေး ထိုင်နေပြီး အောင်မြင်မှုက သင့်ထံ အလည်လာမယ်လို့ မျှော်နေလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ဤအခန်းမှာ သင့်အိပ်မက်တွေကို တကယ်ဖြစ်လာစေမယ့် လက်တွေ့ခြေလှမ်းများ ကို သင်ယူရမှာပါ။
စဉ်းစားပါ..... ပြောပါ.... ဆောင်ရွက်ပါ ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို သင့်အောင်မြင်မှုအတွက် ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် နည်းမှန်လမ်းမှန် ကျင့်သုံးမယ်ဆိုပါက သင်ဟာ မီးကုန်ယမ်းကုန် ကြဲရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီး သင့်ဘဝရဲ့ ထူးခြားအံ့ဖွယ် အကောင်းဆုံး အောင်မြင်မှု ရလဒ်တွေကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရရှိမယ့် လမ်းပေါ်ကိုရောက်နေပြီ ဖြစ်တယ်။
(ဒီနေရာမှာ မူရင်းစာရေးသူ ဂျက်ဖ် ကီလာက Heaven Helps- ကောင်းကင်ဘုံက ကူညီတယ်လို့ ရေးထားတာပါ။
ကျွန်ုပ်က ဒီ စိတ်ခွန်အားပေးစာပေတွေကို လူငယ်များ ဘာသာမရွေး ဖတ်ရှုစေလိုတဲ့ အတွက် ဘာသာရေး အရိပ်အငွေ့ ပါတဲ့ စာသားတွေ ကို တတ်နိုင်သမျှ ထို အရိပ်အငွေ့ကင်းအောင် ကြိုးစားရေးသားပါတယ်)
ဂျက်ကီလာဟာ အပိုင်းတိုင်းမှာ သူ့ အတွေးအခေါ်ကို ပံ့ပိုးပေးမယ်. ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ အဆိုအမိန့်များ နဲ့ ပိုမိုအားကောင်းအောင် စီစဉ်ထားပါတယ်။ အဲဒီ ခေါင်းစဉ်လေးတွေနဲ့ အဆိုအမိန့်လေးတွေကို ဖတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် စိတ်နေသဘောထားက ဘယ်လောက်ထိ အရေးပါပြီး ဘယ်လောက် အစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာကို မှန်းဆ နိုင်ပါတယ်။
ဂျက်ကီလာရဲ့ နည်းစနစ်တွေကို သေသေချာချာ လေ့လာကာ သူအကြံပေးတဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်ပြီး ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်အောင်မြင်တဲ့သူ ဖြစ်ချင်စိတ်ပေါက်လာ မှာ အသေအချာပါပဲ။
အပိုင်း ၁- အောင်မြင်မှုဆိုတာ စိတ်ကူးကစတယ်။
ဒီအပိုင်း ၁ ကို သင်ခန်းစာ (၅) ခုနဲ့ အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတယ်။
သင်ခန်းစာ ၁- သင့် စိတ်နေသဘောထားသည် ကမ္ဘာကြီးကိုကြည့်တဲ့ ပြူတင်းပေါက် ဖြစ်တယ်။
သင့်ကိုယ်သင် ကြည်လင်တောက်ပအောင်ထားပါ။ သင်ဟာ လောကကြီးကိုကြည့်တဲ့ သင့် ပြူတင်းပေါက်ပဲ။
- ဂျော့ ဘားနတ် ရှော
သင်ခန်းစာ ၂- သင်ဟာ သံလိုက်လူသားတစ်ဦးဖြစ်တယ်
သင်လုပ်နိုင်တယ်ထင်တာဖြစ်စေ၊ မလုပ်နိုင်ဘူး ထင်တာဖြစ်စေ၊ သင်မှန်ပါတယ်။
- ဟင်နရီ ဖို့ဒ်
သင်ခန်းစာ ၃- အောင်မြင်မှု အတွက် သွားမယ့်လမ်း ကို ပုံဖော်ပါ
မလုပ်ဆောင်ခင် အရင်ဆုံး သင့် စိတ်ကူးထဲကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်အောင်ကြည့်ပါ။
- အဲလက်စ် မောရစ်ဆင်
သင်ခန်းစာ ၄- ကတိကဝတ် တစ်ခုထားပါ.... ဒါ ဆို သင် တောင်တန်းတွေကိုတောင် ရွှေ့နိုင်လိမ့်မယ်။
ဒီစွမ်းအားက ဘာလဲဆိုတာ ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူး၊ ကျွန်တော်သိတာက အဲဒီ စွမ်းအားရှိတယ်၊ လူတစ်ယောက်က သူဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာ အတိအကျသိတဲ့ အခါနဲ့ မတွေ့မချင်း ဘယ်တော့မှ နောက်မဆုတ်ဘူး လို့ အပြည့်အဝ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ အခါကျမှ ရရှိနိုင်တဲ့ အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။
- အလက်ဇန္ဒြား ဂရေဟမ် ဘဲလ်
သင်ခန်းစာ ၅- သင့် ပြဿနာတွေကို အခွင့်အလမ်း အဖြစ်ပြောင်းပါ။
ကံကြမ္မာ လွဲချော်မှုတိုင်းက တူညီတဲ့ သို့မဟုတ် ပိုသာတဲ့ အကျိုးအမြတ် မျိုးစေ့ တွေကို သယ်ဆောင်လာတတ်တယ်။
- နပိုလီယံ ဟေးလ်
အပိုင်း ၂ - စကားလုံးတွေကို သတိထားပါ
တစ်ခုခုကို ကြိမ်ဖန်များစွာ အထပ်ထပ်လုပ်ပါ၊ အဲ့ဒါက သင့်ကိုယ်ပိုင် အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
- တွမ် ဟော့ပ်ကင်စ်
သင်ခန်းစာ ၆- သင့်စကားလုံးများက မီးလျှံလမ်းကြောင်း ချန်ခဲ့လိမ့်မယ်။
သင်အမြဲတမ်း ရွေးချယ်သုံးစွဲတဲ့ စကားလုံးတွေ က သင့် နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ကို ပုံဖော်နေတယ်။
- အန်တိုနီ ရော်ဘင်စ်
သင်ခန်းစာ ၇- ဘယ်လိုနေလဲ
သင့်ပါးစပ်ဖျား ဦးတည်တဲ့ အတိုင်း သင့်နေ့တွေက ဖြစ်ပျက်သွားရတယ်။
သင်ခန်းစာ ၈ - ညည်းငြူ မြည်တွန် နေတာတွေရပ်ပါ။
ပြဿနာတွေက ကလေးတွေလိုပဲ ပြုစုစောင့်ရှောက် နေရင် ကြီးထွားလာမှာပဲ။
- လေဒီ ဟော်လန်
အပိုင်း ၃- တကယ်လက်တွေ့လုပ်တဲ့သူတွေကို မိုးနတ်မင်းက ကူညီတယ်။
ဘယ်အရာမှ သူ့အလိုလိုဖြစ်မလာဘူး။ သင့်ဆီကိုရောက်လာအောင် သင့်ကိုယ်ပိုင် အစွမ်းအစနဲ့ သင်ကိုယ်တိုင် လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိတဲ့အခါမှ သင့်ဆီကို အားလုံး ရောက်လာမှာပါ။
- ဘန် စတိန်း
သင်ခန်းစာ ၉- အကောင်းမြင်သူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းထားပါ။
မှန်က လူတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာကို ထင်ဟပ် ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ ရုပ်သွင် အစစ်က ဘယ်လိုလဲ ဆိုတာကိုတော့ သူရွေးချယ်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုသူတွေကသာ ပြနိုင်မှာပါ။
- အသက်ရှင်ခြင်း သမ္မာကျမ်းစာ၊ သုတ္တံ ၂၇
သင်ခန်းစာ ၁၀- သင့် ကြောက်စိတ် ကို ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ခြင်း ဖြင့် တိုးတက်မှု ရယူပါ။
သင်ကြောက်တဲ့ အရာကို လုပ်ပါ၊ အကြောက်တရားရဲ့ သေခြင်းက သေချာပေါက်ပါပဲ။
- ရဲ့ဖ် ဝါဒို အီမာဆန်
သင်ခန်းစာ ၁၁ - အပြင်ထွက်ပြီး ကျရှုံးကြည့်လိုက်ပါ
ကျရှုံးခြင်းဆိုတာ နောက်ထပ် ပညာသားပါပါ ပြန်စတင်နိုင်စေတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အခွင့်အလမ်း ပေါ့။
သင်ခန်းစာ ၁၂- ရလဒ်များ ရရှိစေတဲ့ အပေါင်းအသင်း ကွန်ရက်
သင်က အခြားလူတွေကို သူတို့လိုချင်တာ ရစေဖို့ ကောင်းကောင်း ကူပေးခဲ့ မယ်ဆိုရင် သင့် ဘဝမှာ သင်လိုချင်တာအားလုံး ရနိုင်ပါတယ်။
- ဇစ် ဇစ်ဂလာ
နိဂုံးချုပ် - သင့် စိတ်နေသဘောထားကို ပြောင်းလိုက်ပါ သင့် ဘဝပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။
သင့် အခြေအနေဝန်းကျင်ကို ပြောင်းချင်ရင်၊ အရင်ဦးဆုံး သင် မတူတဲ့ ရှုဒေါင့်က စတင် တွေးကြည့်ပါ။
- နော်မန် ဗင်ဆင့် ပီလန်း
ခုထိ ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် ဒီစာအုပ်မှာ ပါတဲ့ အခန်းတွေကို အကြမ်းဖျင်း သိသွားလောက်ပါပြီ၊ ဂျက်ဖ်ကီလာက ကျော်ကြားသူတွေရဲ့ အဆိုအမိန့်များကို ထည့်သွင်းထားပေမယ့် အသေးစိတ် ရေးသားချက်တွေထဲမှာ ကျွန်ုပ် တို့ အနေနဲ့ ကိုးကားစရာ သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ အဆိုအမိန့်တွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း ၁ နဲ့ အဲဒီ အပိုင်းမှာ ပါတဲ့ သင်ခန်းစာ တွေကို ကြည့်ကြရအောင်။ အဓိက အချက်တွေကိုပဲ ထုတ်နုတ် ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျက်ဖ်ကီလာက အပိုင်း ၁ ကို အောင်မြင်မှုဆိုတာ စိတ်ကူးကစတယ် ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ စဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ ပြီး တော့ သူဆိုလိုချင်တာကို ပံ့ပိုးပေးမယ့် ဒေါက်တာ ဂျိုက်စ် ဘရားသားစ် ရဲ့ အဆိုအမိန့်လေးကို ထည့်လိုက် တယ်။
ဆက်လက်ဖော်ပြပါဦးမယ်။ စိတ်နေသဘောထားကောင်းများဖြင့် ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ပျော်ရွှင် လွတ်လပ် အောင်မြင်စွာ ဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်သူများ ဖြစ်ကြပါစေ။